Shwe Myanma Thway – Flowing in Every Myanmars' Hearts
What is Shwe Myanma Thway
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာ့သွေး ကုမ္ပဏီက သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ဆေးရုံတင် လူနာများ နှင့် ဆေးရုံများ အတွက် နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးပြည့် ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ကို ဖြန့်ဖြူးပေးမယ့် Your Preferred Healthcare Supplier ဖြစ်ပါတယ်။
A Myanmar company which supplies international grade healthcare products, rehab and disability aids as well as other healthcare consultations.
Our line of products...
သင့်အတွက် Products နှင့် Services များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး Discounts/Promotions များနှင့် ဗဟုသုတ ရဖွယ် သိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ.....
Information for our current Discounts/ Promotions as well as useful tips and knowledge for the products we carry....
"မြန်မာတို့၏ အသွေးအသားထဲတွင် အမြဲ စီးဆင်းနေမည့် ရွှေမြန်မာ့သွေး"
ယခုချိန်မှ စပြီး ရွှေမြန်မာ့သွေးကုမ္ပဏီလီမိတက် (SMMT Myanmar) ဟာ DNR Wheels Pte Ltd (Singapore) ရဲ့ Official Myanmar Partner ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်း၏ Singapore Brand ဖြစ်သော ComfyCare ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး မြန်မာနှင့် စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှ clients များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သော ဝန်ဆောင်မှုများစွာ ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
We are proud to announce that Shwe Myanma Thway Co., Ltd. (SMMT Myanmar) is now the official Myanmar partner of DNR Wheels Pte Ltd (Singapore) and the sole authorised distributor of their ComfyCare product lines in Myanmar. We look forward to our prosperous business collaborations to serve our clients in both countries.